Posted at 17:21 14 Sebtembar 202117:21 14 Sebtembar 2021
Maxaa gabadhan ku dhiirogaliyay in ay kaalin wayn ku yeelato siyaasadda Norway?
Hase yeeshee Marayn Cabdi ayaa sheegtay in dadka soo doortay aysan ahayn Soomaali oo kaliya. Waxayna intaa ku dartay in Xisbiga ay ka tirsantahay ay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi ay aad u tagaeereen.
Posted at 10:25 9 Luulyo 202110:25 9 Luulyo 2021
Waxyaabaha qaybta ka qaatay in dadkaan ay dhaadheeraadaan waxaa ka mid ah cunista raashiinka caanaha ka sameysan.
Posted at 16:59 11 Juunyo 202116:59 11 Juunyo 2021
Dilkii afar xubnood oo ka tirsanaa qoys muslim ah iyo dhaawaca canug yar oo gaari xamuul ah ku jiiray magaalada London, Ontario, Canada, maalintii Axadda ee 6-da Juun, waxay soo cusbooneysiisay hadal heynta Islaam nacaybka ama Islaam nacaybka Galbeedka.
Posted at 15:59 10 Juunyo 202115:59 10 Juunyo 2021
Posted at 17:44 8 Juunyo 202117:44 8 Juunyo 2021
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa wajiga laga dharbaaxay xilli uu booqasho ku joogay magaalo ku taalla koonfur bari ee dalkaas.
Posted at 3:24 20 Abriil 20213:24 20 Abriil 2021
Markii ugu horreysay, Xisbiga the German Greens wuxuu shaaciyay musharraxa ku matalaysa doorashada federaalka Jarmalka.
Posted at 10:30 14 Abriil 202110:30 14 Abriil 2021
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaatid diyaargarowga ciidammada Ruushka ay ka wadaan agagaarka bariga Ukraine.
Posted at 1:00 3 Abriil 20211:00 3 Abriil 2021
Quwadaha caalamka oo cambaareeyey "xad gudubka xuquuqda aadanaha" ee ka dhacay gobolka Tigray
Dalalka hodanka ah ee ugu dhaqaalaha roon dunida ee ururka ay ku midaysanyihiin magiiisa loo soo gaabiyo G7 ayaa sheegay in ay "aad uga walaacsan yihiin" wararka tibaaxaya xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhacay gobolka colaaddu ka taagan tahay ee Tigray ee dalka Itoobiya.
Posted at 1:43 20 Maarso 20211:43 20 Maarso 2021
Maxaad ka taqaannaa waddanka ugu farxadda badan dunida?
Warbixin ay qaramada midoobay soo saartay ayaa sheegtay dalka Finland inuu yahay dalka ugu farxadda badan dunida.
Posted at 3:40 1 Maarso 20213:40 1 Maarso 2021
Maxay Iiraan xilligan meesha uga saartay wadahadal laga yeesho nukliyeerkeeda ?
Tahraan ayaa waxa ay ku adkaysanaysaa in Mareykanka ay tahay in marka hore uu qaado cunaqabataynta uu kaligii ku soo rogay inta aanan dib loo furin wadahallada.
Bog 1 of 4